Nhau - Sechikamu cheiyo ChemCycling chirongwa, BASF yakaisa mari mamirioni gumi nematanhatu muTire pyrolysis mafuta kambani Pyrum
BASF SE yakaisa 16 mamirioni euros muPyrum Innovations AG, kambani inoshandisa marara tyre pyrolysis tekinoroji, inotungamirwa muDillingen / Saarland, Germany. Nenari iyi yekudyara, BASF ichatsigira kuwedzera kwePyrum's pyrolysis chirimwa muDillingen uye nekuwedzera kusimudzira kwetekinoroji.
Pyrum parizvino iri kushanda chirimwa che pyrolysis chematai emarara, ayo anogona kugadzirisa anosvika zviuru gumi zvematani ematai pagore. Pakupera kwa2022, mitsara miviri yekugadzira ichawedzerwa kufekitori iripo.
BASF inotora yakawanda yemafuta epyrolysis uye yoishandisa sechikamu cheyero yekuyera massaiti sechikamu chemushini wayo wekudzokorodza makemikari kuigadzira kuita zvigadzirwa zvitsva zvemakemikari. Chigadzirwa chekupedzisira chichava kunyanya chevatengi muindastiri yeplastics avo vari kutsvaga epamusoro-soro uye anoshanda epurasitiki zvinovakirwa pazvinhu zvakashandiswazve.
Uye zvakare, Pyrum inoronga kuvaka mamwe matai pyrolysis michero pamwe nevavanofarira. Iyo yekudyidzana marongero anomhanyisa nzira yekushandisa yakasarudzika tekinoroji yePyrum mukugadzira kwakawanda. Vagari venguva ramangwana vateki veiyi tekinoroji vanogona kuve nechokwadi chekuti pyrolysis oiri inogadzirwa inozotorwa neBASF uye inoshandiswa kugadzira zvigadzirwa zvemakemikari epamusoro Naizvozvo, kubatana kuchabatsira kuvhara kutenderera kwemashure-evatengi mapurasitiki marara. Zvinoenderana neIN DIN EN ISO 14021: 2016-07, mataya emarara anotsanangurwa seashure-mutengi epurasitiki tsvina.
BASF naPyrum vanotarisira kuti, pamwe nevamwe vanobatana, vanogona kuvaka anosvika zviuru zana zvematani e pyrolysis oiri yekugadzira oiri kubva kumatairi emarara mumakore mashoma anotevera.
BASF yakazvipira kutungamira shanduko yeindasitiri yepurasitiki kune yakasendamira hupfumi. Pakutanga kwekemikari kukosha kwecheni, kutsiva zvisaririra zvigadzirwa nemishonga inogadziriswazve ndiyo nzira huru mune izvi. Nenari iyi yekudyara, isu takatora danho rakakosha nekumisikidza hwaro hwakakura hwekupa mafuta epyrolysis uye kupa vatengi zvigadzirwa zvekutengesa zvichibva pamakemikari akadzokororwa epurasitiki.
BASF inoshandisa iyo pyrolysis mafuta emarara matayi seyekuwedzera mbishi zvinhu zvakasanganiswa mafuta epurasitiki marara, inova tarisiro yenguva refu yekemikari yekudzokesa chirongwa.
Zvigadzirwa zvinogadzirwa nemafuta epyrolysis uchishandisa nzira yekuyera zvine zvimiro zvakafanana nezvigadzirwa zvakagadzirwa pachishandiswa zviwanikwa zvefosili. Uye zvakare, ivo vane yakaderera kabhoni tsoka inofananidzwa neyechigadzirwa zvigadzirwa. Uku ndiko kupera kweLife Cycle Ongororo (LCA) ongororo yakaitiswa nekambani yekutsvaga Sphera pachinzvimbo cheBASF.
Kuongorora kweLCA kunyanya kunogona kuratidza kuti mamiriro aya anogona kushandiswa kuburitsa polyamide 6 (PA6), inova yepurasitiki polymer, semuenzaniso, yekugadzira zvikamu zvepamusoro-soro muindasitiri yemotokari. Inofananidzwa netani imwe yePA6 inogadzirwa ichishandisa fossil mbishi zvinhu, imwe tani yePA6 inogadzirwa ichishandisa Pyrum tire pyrolysis oiri kuburikidza nenzira yehuremu hweyero inoderedza kabhoni dhayokisaidhi nematani 1.3. Izvo zvakaderera emesi zvinobva pakudzivirira kupisa kwemataya emarara.
Yakabudiswa muna Gumiguru 5, 2020 muHupenyu Kuratidzira Kuongorora, Musika Musika, Mapurasitiki, Kudzokorora, Matai | Permalink | Mhinduro (0)
Waste Tire Kudzokorora Muchina, Tire Pyrolysis, Dongo Mapurasitiki Refinery, Plastiki Recycling Machine, Inoenderera Pyrolysis Miti, Batch Pyrolysis Chirimwa,